Samsung Galaxy S5 & N'okpuru ebe
Fun Facts banyere Samsung Galaxy S5
Samsung Galaxy S5 nwere Kids mode na egwuregwu na animations, nke mere na ha na-agaghị ọsịsọ gị onyeisi mmadụ na mberede ma ọ bụ na-emefu ego gị lavishly.
Samsung Galaxy S5 e wepụtara azụ February, 2014. Olee otú ọtụtụ n'ime i nwere ya? The 5.1-anụ ọhịa Samsung Galaxy S5 bụ n'ezie a ga--nwere ngwaọrụ nke na-ekiri fim, TV na-egosi, Anime usoro na ọ laa. Samsung Galaxy S4 & n'okpuru nwere ike ịbụ ya mere kwesịrị ekwesị, ma ị ka nwere ike a ire ụtọ nkiri ahụmahụ.
E wezụga ihe ọma ahụmahụ, ụfọdụ n'ime unu nwere ike ka na-eme mkpesa na ụfọdụ nke gị fim-apụghị egwuri na Samsung Galaxy S5 & n'okpuru. Gịnị kpatara nke ahụ? Fọrọ nke nta, e nwere isi ihe abụọ kpatara n'ihi na. Na otu aka, fim nwere ike a format na-adịghị akwado site na Samsung Galaxy igwe. Ego ma gị nkiri format bụ dakọtara na Samsung igwe ebe a. Na ndị ọzọ, ọ bụ ezie na fim nwere dakọtara usoro na ngwaọrụ gị, ma codec bụghị nri. Nọmalị, ndị na-akwado codecs bụ H.263, H.264, VC-1 na VP8.
Olee otú ị pụrụ idozi a video egwu nsogbu? Echegbula. Ị na mkpa a video Ntụgharị nyere gị aka pụta maka ma nke n'elu kwuru banyere ihe. Ma ọ bụrụ na ị ka nwere ike adịghị enweta ya kpebiri, ịtụkwasị m obi e kwesịrị nsogbu na gị isi iyi video, nke nwere ike rụrụ arụ. Gaa ego gị videos.
The n'elu bụ n'ozuzu ngwọta maka gị mgbasa ozi ndakọrịta nsogbu na Samsung Galaxy S5 & n'okpuru. Ego ndị na-esonụ maka ọzọ zuru ezu ndu.
Samsung Galaxy S5 Atụmatụ
Lee ndị Atụmatụ na usoro na-eduzi gị na-egwu ọ bụla formats na gị Samsung Galaxy ekwentị gị, gụnyere Obodo faịlụ na ekwentị gị nakwa online videos.
Akwado Video Formats maka Samsung Galaxy S4, S3 na S2
Olee otú iji tọghata iTunes M4V ka Samsung Galaxy S5 / S4 / S3
Olee otú Play WMA on Samsung Galaxy Series
Ò Kwekọrọ n'Ozizi Facts na Samsung Galaxy S5 na S4
E nwere ike ịbụ obere dị iche nke na-akwado formats n'etiti differnt ụdị nke Samsung Galaxy ekwentị. Ebe a na-zuru ndepụta nke Samsung Galaxy S5 na S4.